Phentermine 37.5 mg: Aasaaska, Dhibaatooyinka ay keento & Faallooyinka
Waxaan helnay 1 alaabta aad heli karto
Waa maxay Phentermine 37.5?
Phentermine 37.5, oo sidoo kale loo yaqaan generic Adipex, waa daawo lagu heli karo oo keliya warqad dhakhtar qoro. Phentermine 37.5 waa FDA la ansixiyay waxayna ka kooban tahay 37.5mg oo ah phentermine hydrochloride. Udgoon ma leh, midabkeeduna waa caddaan, waana biyo milma. Waa in loo qaataa iyadoo loo raacayo tilmaamaha takhtarka, taas oo inta badan loola jeedo calool madhan oo leh galaas biyo ah oo buuxa.
Maxaa loo isticmaalaa Phentermine 37.5?
Waxaa loogu talagalay inay ka caawiso shakhsiyaadka buurnaanta leh inay si fudud u lumiyaan miisaanka maadaama calaamadaha la xiriira miisaanka lumay la yareeyay isticmaalkiisa. Tani waa sababta oo ah faa'iidooyinka isticmaalka Phentermine 37.5 waxaa ka mid ah xakamaynta rabitaanka cuntada iyo kor u qaadista tamarta. Tani waa sababta oo ah kiimikooyinka ku jira kiniiniyada waxay la shaqeeyaan nidaamka neerfaha ee maskaxda si ay ugu khiyaaneeyaan maskaxda inay u maleyso inay dareemeyso inay ka buuxsamayso qadar yar oo cunto ah, iyo in dareenkaani uu ka sii dheer yahay sida caadiga ah. Intaa waxaa dheer, waxay ka kooban tahay kicin kiciya heerarka tamarta sare inkasta oo aad cunayso kalooriyo yar.
Waa maxay sababta aan iibso Phentermine 37.5?
Sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay Phentermine 37.5 waxay leedahay awood dulqaad sare marka lala barbardhigo qiyaasaha kale. Waxay ka kooban tahay qaddar aad u yar oo ah norepinephrine oo markaa ka faa'iideystayaal ah. Dhakhaatiirta badankood waxay kuu qoraan inaad u aado qaddarkan sababtoo ah faa'iidooyinka muhiimka ah.
Isu dheelitirka faa'iidooyinkani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah Phentermine 37.5, maxaa yeelay waxay hubaal ka dhigeysaa in dadka cunaya ay ka qeyb qaadan karaan cunno iyo jimicsi habboon - laba qaybood oo muhiim u ah miisaanka dabiiciga oo yaraada iyo qaab nololeed caafimaad leh - iyada oo aan la dhibaataynin dhibaatooyinka aan fiicnayn ee horseedi kara dhammaan cuntooyinka aad u tiro badan inay fashilmaan.
Waxaa muhiim ah in la ogaado, in kastoo, in Phentermine 37.5 uusan ka dhigi doonin in isticmaaleyaasheeda ay miisaanka iska dhinaan keligood. Qaadashada daroogada si fudud ugama dhigi doonto miisaannada dheeraadka ah ee dufanka inay dhacaan. Taabadalkeed, waxay suurtogal ka dhigeysaa dadka cuntada cunaya inay qaadaan tallaabada ku habboon iyagoon ka cabsanayn gaajo fara badan ama daal aad u daran.
Waxtarka daawadani waxay ka dhigtay tan ugu badan ee la qoro daroogada oo miisaankiisu hoos gudaha Mareykanka shakhsiyaadka buuran. Waxay si wax ku ool ah uga caawin kartaa bukaanadaas inay lumiyaan miisaanka oo ay yareeyaan halista ay ugu jiraan xaalado caafimaad oo daran sida dhiig karka, sonkorowga, iyo kolestaroolka sare.